အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာ Investing - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Investingstockonline.com အင်တာနက်အပေါ်ပွဲစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များနှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရစ်ကျပြန်လည်သုံးသပ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းတန်ဖိုးရှိသောနှင့် binary options များ, crypto-ငွေကြေး, CFDs, အနာဂတ်, စတော့ရှယ်ယာနှင့်ပိုပြီးအပေါ်နေ့စွဲသတင်းအချက်အလက်မှတက်သည်။ ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစတင်တဲ့အခါမှာဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်အနာဂါတ်ကာလတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိနေပါဦးမည်။
Investingstockonline.com ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွေ့အကြုံများကိုဝင်စားသောသူဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစစ်ပြန်များက run နှင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မူလက binary options များအထူးကုအဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ကတည်းကသည်အခြားဘဏ္ဍာရေးတူရိယာကိုထည့်သွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့ပါပြီ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပွဲစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အခြားအသုံးဝင်သောကုန်သွယ်သတင်းအချက်အလက်ပေးထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ, ဝယ်ရောင်းအချက်ပြမှုများ, ကုန်သွယ်ဆော့ဖျဝဲအဖြစ်နောက်ဆုံးပေါ်ဘဏ္ဍာရေးသတင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများအပေါ်ဆောင်းပါးများနှင့်အစီရင်ခံစာများကိုဆက်ကပ်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များ, အမည်ရသူတို့ရဲ့တွင်လည်းဖို့အရေးအပါဆုံးအရာတို့ကိုပေါ်မှာငါတို့အလုပ်နှင့်အာရုံကိုအာရုံစူးစိုက်။ ဤနည်းကျနော်တို့သူတို့ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနိုင်ရအောင်လိုအပ်သည့်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကိုပေးမျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်အင်တာနက်အပေါ်ပွဲစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျော်လွန်ဦးဆောင်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒေသခံနှင့်နိုင်ငံတကာနှစ်မျိုးလုံး, အင်တာနက်ပေါ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်ဦးချင်းစီသည်အရစ်ကျပလက်ဖောင်းဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်ဒီမစ်ရှင်ဖြည့်ဆည်း။
ပွဲစားအမျိုးမျိုးတို့ကိုအပေါ်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးသည့်အပြင်, ငါတို့သည်လည်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အခြားရှုထောင့်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့အချက်ပြမှုများ, ကုန်သွယ်ရေးစနစ်များနှင့်ပိုပြီးဝယ်ရောင်းချ, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုဖုံးလွှမ်း။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ကွဲပြားခြားနားသောပွဲစားများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုကောင်းဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါနှင့်ထို့ထက် ပို. တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးရန်။
ငါတို့သည်သင်တို့သည်ငါတို့အဘို့ရှိစေခြင်းငှါမဆိုတုံ့ပြန်ချက်ကြိုဆိုပါတယ်။ မသာသင့်ရဲ့မှတ်ချက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းပိုကောင်းအကြောင်းအရာဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဘူး, ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ရဲ့အရောင်းအ၌အကြှနျုပျတို့၏ကတခြား client များကိုထောကျပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ဖောက်သည်များ၏တုန့်ပြန်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမတူညီသောပွဲစားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားသောဆန့်ကျင်သောထင်မြင်ချက်များကိုစုဆောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မင်းရဲ့အကြံဥာဏ်တွေကိုပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကိုမျှဝေဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
investingstockonline.com ကွဲပြားခြားနားသောပွဲစားများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ကို set up ခံခဲ့ရပေမယ့်, ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးရှိသောကုန်သွယ်ပညာရေးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ပရိသတ်ကိုပေးချင်တာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ်, crypto ကုန်သွယ်, binary options များကုန်သွယ်အများအပြားကပိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြည့်စုံသည်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက်သင့်လျော်သောသောကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာတိုးတက်လာအောင်ကူညီအားလုံးကိုဤအချက်အလက်စုဝေးရောက်လာကြ၏။
သုံးသပ်ချက်များ investingstockonline.com အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုစီကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းကြည့်ပြီးစစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် site တစ်ခုစီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အမြန်နှုန်း၊ အားနည်းချက်များနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားလုံးအတွက်အသုံး ၀ င်သည့်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်များပေးရန်အခြားပွဲစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာပွဲစားကြီးကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုကိုရှာတွေ့လားကြည့်ပါ။
အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ၏အကြောင်းအရာများကိုအစဉ်မပြတ်မွမ်းမံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်ပွဲစားအသစ်များကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေပြီးဘဏ္financialာရေးသတင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲစောင့်ကြည့်နေသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာစျေးကွက်စိတ်ဓာတ်မသက်ဆိုင်ဘဲအမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်တဲ့ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလိုအပ်မယ်ဆိုရင် investingstockonline.com နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအနိုင်ရတဲ့အရောင်းအ ၀ ယ်တွေကိုကူညီပေးပါ။
လက်မှတ် Kvk: 72614390
မှတ်ပုံတင်ရုံး: Torenburg 20, 1811 MJ, Alkmaar, နယ်သာလန်
မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာ - ၁၈၁၁ MJ၊ Torenburg 20, နယ်သာလန်၊ Alkmaar
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော့်နာမည် Bart Bregman ပါ။ ကျွန်မအသက် ၂၉ နှစ်ရှိပါပြီ။ နှင့်နယ်သာလန်မှ။
Facebook က: https://www.facebook.com/bart.bregman.1
ကြှနျတေျာ့ကို youtube ကရုပ်သံလိုင်း: https://www.youtube.com/channel/UCbKq04k4WS5E5NfMlkN1_7Q/
အလုပ်အကိုင်: investingstockonline.com များအတွက်နေ့ Trader, ဘလော့ဂါ
ဇီဝ: ငါ့အထရေးဒင်းနှင့်ဤ website ကိုများအတွက်အလုပ်နှစ်ခုလုံးကိုအွန်လိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်ငါ့ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ခြေသလုံးဖြစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွကမ္ဘာတဝှမ်းခရီးသွားလာခွင့်ပြုပါတယ်။
ငါ 2014 ၌ငါ့ကုန်သွယ်အုပ်ထိန်းစတင် 2016 အတွက်ပြည့်ဖြစ်လာခဲ့ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာကိုယ့်စတော့ရှယ်ယာများ, Forex, ဒစ်ဂျစ်တယ် option ကို, Binary option ကို, CFD နှင့် Cryptocurrency အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီ။ ငါသင့်ကျွမ်းကျင်မှုအစုံအတွက်တိုးတက်စေရာတစ်ခုခုကိုအမြဲရှိပါတယ်, ကုန်သွယ်ကိုချစ်။
ဒုတိယအနေဖြင့်အရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းသည်စောင့်ဆိုင်းသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လှံုင်းအချိန်တွင်ပွဲစားလုပ်ငန်း၌ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုတည်ဆောက်ရန် Investingstockonline.com ကိုကူညီပါသည်။
ဤတွင်သို့သော်အစဉ်မပြတ်ငါ2လက်ပ်တော့သုံးတဲ့လမ်းနှင့် Samsung ကတက်ဘလက်အပေါ်ခရီးသွားလာ, နယ်သာလန်၌ငါ့ကုန်သွယ်မှု setup ကိုပြသတဲ့ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၏အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်မှု: ၃ ဇူလိုင် - USD / JPY + $ 2017 အမြတ်
Facebook က: https://www.facebook.com/theNielsHammer
Tel: + 316132 **** အီးမေးလ်ကိုဆက်သွယ်ပါ
အလုပ်အကိုင်: investingstockonline.com များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ, Webmaster / ဘလော့ဂါ
ဇီဝ: နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကစုံတွဲကိုပြန်ငါ binary options များအကြောင်း youtube ကဗီဒီယိုကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ငါရောင်းချခဲ့သည်။
ငါအချို့ကုန်သွယ်အကြံပေးဘို့အကြှနျုပျ၏အဆှခေငျပှ Bart ဟုမေးနှင့် "ငါဘယ်လောက်အတိအကျမမှတ်မိပါဘူး" မကြာမီပြီးနောက်
ငါ၏အအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနောက်ခံနှင့်အတူ Bart ရဲ့ကုန်သွယ်အသိပညာပေါင်းစပ်ပြီး။
တစ်ဦးကအများကြီး ထိုအချိန်မှစ. happend သိရသည်။
binary Options ကိုအတိတ်၏အရာဖြစ်၏နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုယခုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အခွင့်အာဏာသည်။
သို့သော်တဦးတည်းအရာကအမြဲအတူတူပင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သငျသညျလှည့်ဖြားနှငျ့သငျ့ပိုက်ဆံခိုးယူဖို့ကြိုးစားနေ .. လိမ်လည်မှုကုမ္ပဏီများသည်။
ထရေးဒင်းပြီးသားအလုံအလောက်အန္တရာယ်များသည်။ ငါ investingstockonline.com နေ့နှင့်ညဉ့်တွင်အလုပ်လုပ်နေကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားဘူးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်
အွန်လိုင်းကုန်သွယ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. ယနေ့အထိသင်တက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ ကနေရှေးခယျြဖို့သငျသညျကိုသာအကောင်းဆုံးပွဲစားများများအတွက်ရွေးချယ်ခြင်း။
တချို့ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ကို။ ငါ 36 နှစ်ပေါင်းရယ်နှင့်ငါ့အိမ်ကမြို့နယ်သာလန်နိုင်ငံ Alkmaar ဖြစ်ပါတယ်။